रावणभन्दा पहिले लंकाका राजा को–को थिए? – Karnalisandesh
रावणभन्दा पहिले लंकाका राजा को–को थिए?
प्रकाशित मितिः १७ चैत्र २०७७, मंगलवार ११:१६ March 30, 2021
प्रस्तुत तस्वीर श्रीलंकाको दामबुल्ला शहर नजिकै रहेको सिगिरिया चट्टानी सहरी संरचना हो। यो संरचना १५०० वर्ष पहिले तयार पारिएको दाबी गरिएको छ।
तस्वीर साभार: प्लानेटवेयर डटकम
काठमाडौँ। श्रीलंका सरकारले ‘रामायण’ मा लंका प्रकरण सम्बन्धी सबै क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गरेर यसको ऐतिहासिकता प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ।
ती ठाउँहरुलाई पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकसित गर्नको लागि गरेको विभिन्न पुरातात्विक अध्ययनले रामायणमा उल्लेखित लंकाको विविध पक्षको जानकारी मिलेको छ।
राजा सुकेशका तीन छोराहरू थिए – माली, सुमाली र माल्यावान। लंकापुरीलाई माली, सुमाली र माल्यावान नाम गरेको ३ राक्षसहरूले त्रिकुट सुबेल ९सुमेरु० पहाडमा बसोबास सुरु गरे। मालीको हत्या गरेर देवताहरू र यक्षहरूले कुबेरलाई लंकापति बनाए। रावणकी आमा कैकेसी सुमालीकी छोरी थिइन। आफ्नो बुबा हजुरआमाको उक्साइमा, रावणले आफ्नी सौतेनी आमा इलबिल्लाका छोरा कुबेरविरूद्ध लड्ने निर्णय गरे।
सुरुमा रावणले सुम्बा र बाली द्वीप कब्जा गरेर आफ्नो शासनको विस्तार गरे। पछि अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप र आन्ध्रालयसमेत कब्जा गरे। त्यसपछि रावणले लंकालाई आफ्नो लक्ष्य बनाए। त्यतिबेलासम्म लंकामा कुवेरको बास थियो। यही क्रममा विभिन्न षड्यन्त्र र जालझेलबाट कुवेरलाई हिमालयमा पठाएर लं‌काका अधिपति रावण स्वयं बने।
रावणको राज्य विस्तार हालको इन्डोनेसिया, मलेसिया, बर्मा, दक्षिण भारतका केही राज्यहरू र सम्पूर्ण श्रीलंकामा फैलिएको पाइन्छ। श्रीलंका सरकारले गठन गरेको श्री रामायण अनुसन्धान समितिका अनुसार श्रीलंका वास्तवमा लंका हो जुन रामायण कालसँग सम्बन्धित छ। समितिका अनुसार श्रीलंकामा रामायण काल ​​सम्बन्धी ५० ठाउँमा अनुसन्धान गरिएको छ र यसको ऐतिहासिकता प्रमाणित भएको छ।
कसरी बन्यो लंका र कसरी पुग्यो रावणको हातमा ?
कुबेर रावणका सौतेनी भाइ थिए। कुबेर एक धनपति थिए। कुबेरले लंका शासन गरेर त्यसलाई विस्तार गर्दै गएका थिए । यस विषयमा लंका सम्बन्धी एउटा कथा पनि छ।
एक पटक देवी पार्वतीले महसुस गरे कि महादेव पनि ईश्वरहरूका परमेश्वर हुन्। सबै देवताहरू सुन्दर दरबारहरूमा बस्छन् तर देवधिदेव भने मसानमा बस्छन्। उनले जिद्दी गरेर महादेवलाई पनि महलमा बस्न आग्रह गरिन् । अझ दरबार इन्द्रको दरबारभन्दा राम्रो र भव्य हुनुपर्छ भन्ने उनको शर्त थियो।पार्वतीलाई महादेवले भने कि हामी योगीहरू हौं, हामीलाई दरबारमा आराम गर्न सुहाउँदैन । दरबारमा बस्ने ठूला नियमहरू छन्। दरबार हामी जस्ताको लागि उपयुक्त छैनन्।
तर देवीको जिद्दीका सामु महादेव झुक्नै पर्‍यो र विश्वकर्मालाई बोलाए । विश्वकर्मालाई यस्तो दरबारको रचना गर्न भनियो कि जसको सौन्दर्य त्रिभुवनमा कतै पनि नहोस् । विश्वकर्माले त्यस्तो दरबार बनाउने ठाउँको खोजी गर्न थाले । उनले चारै तिरबाट पानीले ढाकेको एक ठाउँ देखे जसको बीचमा तीन सुन्दर पहाडहरू थिए । त्यस पहाडमा विभिन्न प्रकारका फूल र वनस्पतिले भरिएका थिए । त्यो ठाउँ लंका थियो ।
ठाउँ खोजीसकेपछि पार्वतीलाई ठाउँको बारेमा बताए । पार्वतीले सोही ठाउँमा एउटा विशाल शहर बनाउन आदेश दिइन् । पछि विश्वकर्माले आफ्नो कलाको परिचय दिँदै सुनको एक अद्भुत सहर निर्माण गरे ।
गृहप्रवेशपछि महादेवले आचार्यहरूलाई दक्षिणा माग्न आग्रह गरे । त्यस सहरमा महादेवको मायाका कारण आचार्य विश्रावको मन प्रलोभनमा डुबेको थियो । उनले वरदान दिने नै भए आफूलाई लंका नै दिन आग्रह गरे ।
महादेवले विश्रवालाई लंकापुरी नै दानमा दिए । उता विश्रवाको दुस्साहस देखेर पार्वती साह्रै रिसाएकी थिइन् । उनले क्रोधमा श्राप पाए कि महादेवको सरलताको फाइदा उठाउँदै तपाईंले मेरो प्यारो दरबारलाई कब्जा गर्नुभयो । महादेवकै कुनै अं‌शले एकदिन यो दरबारलाई जलाएर खरानी बनाइदेओस् भनेर पार्वतीले श्राप दिइन् । दरबारसँगै तिम्रो कुलको पनि नास होस् भनेर पार्वतीले श्राप दिइन् ।
पौराणिक कथाका अनुसार विश्रवाले त्यो दरबार पुत्र कुवेरलाई दिए र रावणले कुवेरबाट त्यो दरबार हत्याएर आफ्नो बनाए । श्रापका कारण शिवका अवतार हनुमानले लं‌का जलाएर विश्रवाका पुत्र रावण र कुंभकर्ण र उनको कुलको नास गरे । श्रीरामको शरणमा भएकोले विभीषण भने बच्न सफल भए ।